Ọ dị mma ịmega ahụ mgbe ị gachara Viagra? - Mmega
Isi > Mmega > Viagra and exercise - akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Viagra and exercise - akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Ọ dị mma ịmega ahụ mgbe ị gachara Viagra?
Enwere ozi dị mma maka ụmụ nwoke nwere ọrịa obi na-ewereViagra: Na-agbasi ikena-emega ahụ mgbe ị takingụsịrịọgwụ - dị ka ụdị nke na-eme n'oge mmekọahụ - anaghị eme ka mgbaàmà obi obi dị njọ ma ọ bụ belata ọbara na-erugharị n'obi, nchọpụta ọhụrụ nwere onwe na-egosi.Jenụwarị 31. 2012 r.
Ugbu a ndị ọrịa m na-ajụkarị m ihe m ga-eme ma ọ bụrụ na Sildenafil anaghị arụ ọrụ? Ma olee nsogbu ndị ọzọ kachasị ọgwụgwọ a na-enwe? ajụjụ iri gbasara Sildenafil. Ya mere, ka anyị pụọ! Nabata na ọwa SwiftMedNZ m.
oyi ịnyịnya ígwè ogologo ọkpa
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ị ga - achọ ka m mee ederede banyere ya, biko tinye ya n'okpuru na ngalaba ịdenye aha, ị nwekwara ike kụrụ obere mgbịrịgba ngosi na - esote bọtịnụ ịdenye aha ka ị ghara ịhapụ ihe ọ bụla kachasị ọhụrụ anyị isiokwu. Sildenafil bụ aha njirimara maka ọgwụ ndị akpọrọ dị ka Viagra ma ọ bụ Silvasta. N'ihi ya, ha bụ otu! Ha bụ ndị na - emechi pde5 ndị ​​na - eme ka ntọhapụ nitric oxide tọhapụrụ nke na - eme ka ọbara na - eruwanye na amụ gị ka i wee nwee ike ịnwụ ma nọgide na - arụ ọrụ mgbe ị na - akpali agụụ mmekọahụ.
Ọ na-adịgide na sistemụ gị ihe dị ka elekere ise na isii. Ọ na-abịa dị ka ọgwụ. Nwere ike were ya dịka ọ dị mkpa, m.
H. otu awa tupu enwe mmekọahụ. Startingdị mmalite amalite bụ milligrams 50, ọ bụ ezie na ụfọdụ ụmụ nwoke nwere ike ịchọ ọgwụ dị elu nke otu narị milligram, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ onye toro ogologo nke nwere obere ọgwụ 25 mg pụọ.
Ọ kacha mma ka ewere ya na afo efu. Ọ dị ezigbo irè! E gosipụtara ịdị irè ya n'ọmụmụ ihe na nkezi nke 84 pasent. Kedu ụdị ọgwụ dị ezigbo elu.
Nke a pụtara na ọtụtụ ndị nwere ọrịa ED ga-ahụ mmelite mgbe ha na-eji ọgwụgwọ dịka sildenafil. Ọ na-amalitekarị ịrụ ọrụ n’ime nkeji iri atọ, wee rụpụta ihe kachasị dị ka otu awa gachara. Ọ ga-anọru elekere ise na isii na usoro gị.
Cheta na ị ga-ewere naanị otu ọgwụ nke sildenafil na oge 24. Sildenafil na ọgwụ angina na-emekọrịta dị ka GTN spray na nitrate mbadamba. Ọzọkwa ụfọdụ ọgwụ ọbara mgbali, dịka. doxazosin.
Imirikiti ụmụ nwoke anaghị ahụ mmetụta ọ bụla. Mana ndị na-eme nwere ike ịnweta isi ọwụwa, ọkụ na-enwu ọkụ, dizzy, nri afọ, ma ọ bụ iwe afọ. A notụla mmanya na ọgwụ a n'ihi na ọ na-eme ka mmetụta ndị a ka njọ.
Ọ bụrụ n ’ere ụlọ nke na-ewe ihe karịrị awa anọ, gakwuru dọkịta ozugbo. N'ihi na ọ bụ mberede ahụike. Ee, enweghi nsogbu ahụike ma ọ bụ mmetụta ndị na-adịte aka.
A naghị atụ aro ya maka ndị nwere ọrịa obi ma ọ bụ ọrịa strok, ọbara mgbali elu a na-achịkwaghị achịkwa, ọbara mgbali elu dị ala, ma ọ bụ mgbaàmà angina na-ejighị n'aka na ọnwa isii gara aga. Sildenafil nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ maka gị ma ọ bụrụ na ị takenụọ obere ọgwụ abụọ, ma ọ bụrụ na ị naghị enwe mmekọahụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na i jiri nri. M ga-atụ aro ichere ụbọchị mbụ ma gbalịa ị doseụ ọgwụ ọzọ ka ibu ma ọ bụrụ na ị takenụbeghị ọgwụ kachasị.
Ọ bụrụ na ọ bụghị, gwa dọkịta gị gbasara usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ. Nke mbu, m ga-atụ aro ka ị gbalịa ọzọ dị ka Cialis. Ndo umu nwanyi, anabataghi ya maka umu nwanyi.
Enwerekwa nchegbu banyere mmetụta ọ na-enwe ogologo oge na ahụ nwanyị. Daalụ maka ilegharị anya wee lelee ụfọdụ ederede m na Cialis na Ahụike Ndị Nwoke.
Viagra ọ na-enyere aka n'ịgba ọsọ?
Ọbụlagodi naViagrana-eme ka ume egwuregwu na obere obere, nwee ike inwe mmetụta dị ịrịba ama na nsonaazụ n'egwuregwu dị ka ebe dị anyana-agba ọsọ, ma ọ bụ ịgba ịnyịnya ígwè na ịgba ọsọ nke Nordic, bụ ndị omume ha nwere ike ịdị na elu nke 6,000 ụkwụ ma ọ bụ karịa, Rundell kwuru.23 nke 2008 r.
Viagra ọ na - eme ka arụ ọrụ egwuregwu ka mma?
Ọtụtụ ọmụmụ elere anya na mmetụta nkeViagrana ọnọdụ hypoxic (obere oxygen) ma chọpụta na ọgwụ ahụmma arụmọrụsite nammega ahụikike (dị ka atụpụtara ya site na ọtụtụ mgbanwe - dị ka mmepụta obi) - nke na-ekpebi etu obi ga-esi arụ ọrụmmega ahụọrụ).11 june 2008 r.
Nke a bụ ego maka ụmụ nwoke chọrọ igbu oge ịmịpụ nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ha oge ka o wee nwee ahụmịhe kachasị mma, ma ọ na-eru otu orgasm ma ọ bụ ọtụtụ orgasm, ma ọ bụ nwee orgasm site na ịbanye site na penile na ikpu mmekọahụ. Anọ m ebe a ịkekọrịta ihe ọtụtụ ụmụ nwoke na-echeghị, mana ọ dị oke mfe na ị nwere ike mejuputa ya ozugbo can nwere ike mejuputa ya ozugbo oge ọzọ ị nwere mmekọahụ ị nwere ike gbanyụọ isiokwu a Kpọọ kpọọ enyi gị nwanyị ma ọ bụ onye ọlụlụ elu wee sị hey nwa m chọrọ ịnwale ihe ọhụụ nke ga-arụ ọrụ oge ọ bụla Ọ nweghị usoro dị egwu iji mụta enweghị ikike iji mee ihe ebe a enweghị ihe ọ bụla ga-eme nke a bụ na ị nwere ike iji, n'agbanyeghị onye ị bụ, ebe ị bụ onye ọ bụ, na ị na-enwe mmekọahụ dị mfe ma dị mfe aghụghọ nke m chọpụtara site na ọrụ m, n'ihi na m na-azụkarị ụmụ nwoke na nke ahụ bụ ọpụrụiche m na-arụ ọrụ na ụmụ nwoke na-ata ahụhụ nká Ejaculation, yabụ ma ị bụ ma ọ bụ na ị chọghị ijigide ogologo oge, ihe m ghọtara bụ na ụmụ nwoke na-eche na ọ gafeela E nwere usoro dị mkpa ha kwesịrị iji mụta ịdị ogologo oge ma ọ bụ bụrụ ezigbo onye hụrụ n'anya.
Eziokwu bụ na enwere ụfọdụ usoro dị elu dị mma nke na-ewe iji mee ihe ndị a ga-amụrụ ma tinye oge oge na ịkwesịrị ịmụrụ onwe gị tupu gị na onye ị hụrụ n'anya alakpuo, mana ọ bụ ụfọdụ usoro ịchọrọ. Echeghị m na nke ahụ dị mfe nghọta ha abanyebeghị n'uche gị wee bụrụ ihe ziri ezi nye ọtụtụ n'ime gị ịbịa ebe ahụ wee chee echiche, oh Chineke m na nke a bụ Ọsọ ruo n'isi dị ka m ma ọ bụ na-abụghị mgbe m gbalịa igbu oge site na ịgafe ya dị ka o kwere mee na ị na-eche nke ukwuu banyere ịwụ ọtụtụ nkọwa nke na-eduga n'ọgwụgwụ nke nwere ike inyere gị aka na igbu oge na-ewe gị oge ị ga-esi ebe ahụ dịkwa mma ya mere lee, ọ bụ, nke a bụ nke m teknụzụ, nke a bụ nnukwu ihe nzuzo dị mfe m ga - eme ka ị gbuo oge oge gị wee dinara ụra ogologo oge. Ị dịla njikere? Nọgide na usoro ahụ ka ọ dị mkpa idobe uwe ogologo ọkpa gị, ụmụ nwanyị na-ewe ogologo oge iji kpoo ọkụ karịa ụmụ nwoke Achọrọ m iji onwe anyị atụnyere microwave na oven, ọ bụ ezie na achọghị m iji gị tụnyere ngwa ọrụ n'onwe gị. Echere m na ọ bụ ntụnyere bara uru nke ukwuu ya mere ka anyị jiri ya ebe a ụmụ nwoke ma ọ bụ dịka ngwa ndakwa nri ị na-agbanye bọtịnụ ị nwere ike ịrụ ọrụ ị nwere ike ikpo ọkụ ngwa ngwa enweghị nchere ị dị njikere ịga bọtịnụ na-aga ụmụ nwanyị dị ka oven ị nwere mee ihe tupu igwu egwu n tinye ihe iji kpoo ya ma dozie ya oven anaghị adị mfe, enwere ngalaba preheat ị ga-ewepụta maka ya, na ị ga-enwe ekele ma kweta na ị naghị naanị tinye ihe niile na etinye oven, ihe ọ bụla ị gbalịrị ịmegharị ma kpoo bọtịnụ ahụ ma ọ na-ekpo ọkụ n'otu ntabi anya, yabụ ụmụ nwanyị nwere ihe atụ a chọrọ oge dị ukwuu iji kpoo anyị ọkụ, anyị ga-arụ ọrụ n'ụzọ anyị ruo ebe anyị nọ njikere inwe mmekọahụ nke a bụ ihe kachasị mkpa gị na ọtụtụ n'ime gị anaghị eji ya dị ka ndị dị otú ahụ. trickzọ dị ebe a bụ igbu oge i yipụ uwe gị otu ọ nwere ike ịtọ gị ụtọ ka ị nwekwuo oge iji kpoo ya ọkụ tupu ị nwetụ ụdị mmetụta ma ọ bụ obi anụ ahụ ọ dị ka ịhụ ka i yipụ ọtụtụ uwe ya ma yipụ uwe gị nke na-enye gị ahụ ya niile dị ka akwaaji ị nwere ike ime ya obi ụtọ site na iji nwayọ metụ aka ya aka n'obi ị nwere ike kpoo ya ọkụ site isutụ ya ọnụ n olu ya niile na-ewe oge gị oge, tụkwasị ya obi na ọ ga-ekwe omume ịla nwayọ nwayọ inye oke uche nye onye ọ bụla Centimeters nke ahụ ya ị nwere ike susuo ya ọnụ ya niile ụkwụ ya na apata ụkwụ ya mgbe ụfọdụ ọ ga-ezuru ịmị mkpịsị aka ya n'ime apata ụkwụ ya iji zipu nwanyị n'ime oke obi ụtọ, tụkwasị m obi na eziokwu na ị nwere uwe ogologo ọkpa gị ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ịhapụ uwe ime gị ma na-agọnahụ ya obi ụtọ nke imetụ gị aka ga-achụkwa ya ara, nke ahụ bụ ya bụ ịkwa emo kachasị asị, gee ntị, aga m eji oge a Achọrọ m imeju gị. ochoro ka i metu ch m achọrọ m ka ịnọdụ ala ma nwee ọ andụ ma hapụ m ka m meere gị nke ahụ.
Ọ na-enwe mmasị iguzogide nke mbụ, mana ọ bụrụ na ị nwere ntụkwasị obi ma doo anya ma na-adịgide adịgide ma mee ka ọ mata ihe ị chọrọ ime bụ ime ka ọ dị ọkụ ma dịkwa njikere, kpoo ọkụ tupu ị hapụ ya obi ụtọ ịmetụ gị aka ọzọ, emesia ọ Aga m enwe ike ịghọta ihe ị na-emere ya ma tụkwasị m obi na ọ ga-enwe ekele maka ya na ọ na-ewe, na oge ahụ adịghị nwayọ nwayọ, ihe dị mma bụ na ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị banyere ịchụpụ ngwa ngwa, nke ahụ na-enye gị oge dị ukwuu ilekwasị anya na ahụ ya kama ilekwasị anya n'egwu gị ma ọ bụ nchegbu ma ọ bụ ichegbu onwe gị banyere ihe ga-eme gị, nke ahụ na-enye gị ohere iji orgasm de na aka gị na ọnụ gị, yabụ na ọ bụghị naanị na ọ dị njikere orgasm, ma ọ nweela orgasm n'ụzọ ahụ ozugbo uwe ogologo ọkpa gị wee malite ịtọ gị ma ọ bụ gị abụọ ụtọ, ọ dịghị ka nke ahụ dị mkpa, ogologo oge ị na-agbatị ruo oge a n'ihi na ị na-egbo mkpa ha, kwenye m , nke a bụ ihe aghụghọ dị mfe ma dịkwa oke mkpa, dịkwa mkpa ly maka ndị ikom na-enweghị ezigbo nsogbu na ịmachachaghị nká, mana naanị ịchọrọ ịzụta onwe gị ntakịrị oge, anyị chọrọ ijide n'aka na ndị mmekọ ha nwere obi ụtọ na afọ ojuju ma ọ bụ na ha chọrọ ijide n'aka na ọ bụ multimulti -orgasmic na ha chọrọ ijide n'aka na ha orgasm site na mmamiri penetration abịa, nke a nwere ike ịbụ ụzọ kachasị mma isi mee ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ inwe orgasm. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnye onye gị na ya orgasm site na ịbanye n'ime mmiri, ụzọ kachasị mma iji mee ya bụ inye ya orgasm n'ụzọ ndị ọzọ na mbụ, ọkachasị na mkpịsị aka gị n'ọnụ gị iji kpalie ya, yabụ enwere m olileanya na nke a ị nwere mmasị na ndụmọdụ dịka m mara na ọ dị mfe nzuzu mana tinye ya n'ọrụ n'oge ọzọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị lụrụ di ma ọ bụ nwee mmekọahụ gị ogologo oge. Surprise na-eju ya anya ozugbo, yabụ na oge a juru ya anya site n’ezie ma na-akpachapụ anya na-elebara mkpa ya anya wee hụ ogologo oge ị ga - ewe ma ọ bụ ole ka ị ga - esi mee ya obi ụtọ site na mbido ruo na njedebe, yabụ na - eji ndụmọdụ a ozugbo ma ọ bụrụ ị nwere ajụjụ ọ bụla ịchọrọ ndụmọdụ ọzọ ị nwere ike ibudata ndu m n'efu ka ị dina ụra ogologo site na ịnụ ụtọ onwe gị.
M ga-ejikọ ya n'okpuru ka ị nweta ya na email Kaitlyn. Ọ nwere ndụmọdụ anọ kachasị amasị m iji nyere gị aka ibi ogologo ndụ wee gbagoo ozugbo, ntuziaka a na-arụ ọrụ maka ụmụ nwoke na-enwebeghị mmekọahụ, mana ụmụ okorobịa ndị na-enweghị enyi nwanyị ma ọ bụ ihe ị na-enweghị inwe ndị mmekọ iji ndụmọdụ ahụ m kọwara na myguide. Mgbe ahụ mgbe gị na nwanyị nwee mmekọahụ, ịnwere ike iji ndụmọdụ a mee ka uwe ogologo ọkpa gị dị ka o kwere mee iji mee ka ị gbasaa ma gbuo oge karịa karịa kaitlynn gmail.com download myguide ma dee na nkwupụta ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ otu nke a na-abara gị uru mgbe ịlechara ya, laghachi ma hapụ m okwu m na-eche banyere ya, kwadebe m hụrụ n'anya ịnụ n'ọnụ gị daalụ ụmụ okorobịa ahụla m n'oge adịghị anya
Ndi Sildenafil na enyere aka na mgbatị ahụ?
Mkpebi:Sildenafilkwadoro ma dị irè maka ọgwụgwọ ED na CHF, ma melite yammega ahụikike. Mbelata nke HR n'ogemmega ahụnasildenafilnwere ike belata ihe oriri oxygen na-eme n'oge mmekọahụ.
Nsogbu a na-enwekarị maka ụmụ nwoke na-anọkarị n’ime ụlọ. N'ezie, mmadụ atọ ọ bụla na-ahụ ya. Oge ụfọdụ ha na-adịru sekọnd iri, oge ụfọdụ naanị nkeji.
Naanị mara na ịnọghị naanị gị ebe a. Agafeela m nke a, m ga-akụziri gị ihe ole na ole na-arụ ọrụ n'isiokwu a taa. Ihe m ji eme ihe, ihe ndị ahịa m ji eme ogologo oge n'ime ime ụlọ.
Maka na oburu na imutaghi otu esi edozi nke a, obu ihe n’ile n’egosi na can't pughi ime ya obi uto, nke nwere ike ime ka nwa agbogho ahu gi na ya jee iga ma obu lee ebe ozo. Nwere ike iso nwoke ọzọ gaa, ma ọ bụrụ na ị nwere ike ime ngwa ngwa. Nke ahụ bụ nnukwu nsogbu ebe a.
Ma ọ bụrụ na ị gbatịkwuo oge, mmekọahụ ga-abụrịrị ihe na-atọ gị na gị ụtọ, nke pụtara inwekwu mmekọrịta nwoke na nwanyị na inwekwu obi ike, inwekwu obi ike n'ime ime ụlọ, nke m chere na ịchọrọ. Dị ka m kwuru, 1 n'ime 3 nwoke na-enweta, ma ọ bụ ka m kwuo, akaghi aka eja culation. 1 n'ime ụmụ nwoke 3 ghọtara ya.
Achọtara m nke ahụ na edemede sayensị. Ọ bụghị naanị site na echiche m ebe a. Agụrụ m na ọ bụ 1 nke 3 ụmụ nwoke, echere m na ọ ga-abụ karịa.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nwoke ọ bụla m maara ahụwo ya na ndụ ya. Na ihe kpatara ụgha a na obere serotonin dị n'ụbụrụ gị. Mgbe mmadụ na-enwe nsogbu serotonin dị ala, ma ọ bụ ikekwe nrụgide, ma ọ bụ ọbụna enweghị ntụkwasị obi onwe ya, ọtụtụ n'ime ya na-aga n'ihu gị n'isi, mana ọtụtụ n'ime ya metụtara nsogbu ahụike ọgụgụ isi.
Enweghị obi ike onwe onye, ​​nrụgide, ogo ala nke serotonin. Ọ bụghị ihe ị nwere ike inyere aka, ọ bụ akụkụ anụ ahụ. Nsogbu ahụike dịka enweghị obi ike nke onwe ma ọ bụ naanị ụjọ na-atụ n'ọnụ ụlọ ị na-ehi ụra na-akpata ya ma ọ bụ ọnọdụ a jọgburu onwe ya.
Ọ dị ka ịgbada ala n'ihi na ọ bụrụ na ọ mee gị ozugbo ị na-atụ ụjọ na ọ ga-eme ọzọ. Ọ ga-emekwa ọzọ n’ihi na ike gwụrụ gị. Yabụ kedu ihe bụ I Echiche nke ihe ndọpụ uche enweghị ike ịkụzi taa.
Mgbe ị na-enwe nrụgide ma ọ bụ obere obi ike, ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụla maka gị na nke a na-eme, ndọpụ uche bụ isi. Nke a bụ igodo ga-enyere gị aka, enwere ihe ndị ọzọ ị ga - eme. Ma ndọpụ uche ga-abụ isi ihe.
Nke a bụ otu n'ime ihe kachasị m mụtara site na nyocha m na kpakpando ndị na-egwu egwu na-agwa anyị ụfọdụ n'ime ihe ha na-eme mgbe ha na-enwe mmekọahụ na set nke nyeere ha aka na ndọpụ uche bụ otu n'ime ha. Nke a bụ nke m mụtara na-elekwasị anya na iku ume gị. Ọtụtụ ụmụ okorobịa anaghị elekwasị anya na ha nọ n'oge a na-elekwasị anya na mmetụta nke amụ ha na ọ ga-eme ha ngwa ngwa.
Ihe ịchọrọ ime bụ na mberede, mgbe ọ dị gị ka ị nọ n'oge a, mgbe ị na-achọ ịgbanye, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ị na-eche na ọ na-abịa ma ị chọrọ n'ezie iru ebe ị na-ede ink, m nọ ụzọ m ebe ahụ, ịchọrọ nwayọ ịchọrọ ilekwasị anya na iku ume gị.
Lekwasị anya na ume gị. Fọrọ nke nta malite ịtụgharị uche. N'ezie, ị ka chọrọ inwe mmekọahụ, mana ị ga-elekwasị anya na iku ume na iku ume.
Gbado anya na mmetụta nke iku ume na-abanye na ọnụ gị. N'ụzọ dị otú ahụ, ọ nwere ike ịdọpụ uche gị ma mee ka ahụ gị dajụọ ma hapụ nrụgide ahụ gị ka ọ ghara ịkwụsị ngwa ngwa. Ihe ọzọ ị nwere ike ime, m mụtara na site na ụfọdụ kpakpando porn na-ekwu banyere ihe ha na-eme na set, bụ ilekwasị anya na mmetụta ọzọ.
Otu nwoke kwuru banyere eziokwu ahụ na ọ ga-elekwasị anya na ebe ụkwụ ya dị. Mgbe ụfọdụ, mgbe ị nọ na porn, ị na-adịchaghị ka ị nọ n'ihe ndina. Are bụ onye iju ebe.
Feetkwụ gị dị na taịlị oyi ma ọ bụ ala osisi ma ọ bụ ihe ọ bụla. Ọ na-ekwu na ọ ga-elekwasị anya na ebe ụkwụ ya dị ma lekwasị anya na mmetụta ụkwụ ya. Ma nwoke ọzọ kwuru na ya lekwasịrị anya na mmetụta dị iche na ahụ ya na otu n'ime ihe mere ị ji eme ngwa ngwa bụ na ị na-elekwasị anya naanị na ọnọdụ na amụ gị na otu ị si nọrọ ebe ahụ.
Want chọrọ ilekwasị anya n’ihe dị iche. Nke a ga - enyere aka nke ukwu. Site n'ụzọ, nke ahụ abụghị naanị ihe ị na-eme n'otu oge ahụ.
Nwere ike ịrụ ọrụ na ilekwasị anya na iku ume gị. Nke ahụ bụ otu ụzọ isi mee ya. Nhọrọ ọzọ bụ ilekwasị anya n'ihe dị iche.
Naanị zuru ike ma lekwasị anya na ihe ọzọ. Nke a bụ ụzọ ọzọ iji mee ya. Nke a abụghị ihe ndọpụ uche, ọ bụ ihe ọzọ.
A na-akpọ ya Kegels. A na-akpọ ya Kegels. Ma were ya na ị na-agbapụ.
Ma chee na ikwesiri ịkwụsị nsị. Mkpụrụ ahụ na-egbochi gị ịpụ. Nke a bụ ahụ ike pc gị.
Nke a bụ ebe ị na-arụ ọrụ na cones. Nke ahụ bụ akụkụ ahụ gị nke nwere ike inyere gị aka ịkwụsị ịmịpụ ọbara. Ma oburu na iwere mmeghari ahu ike site na omume Kegel, inwere ike ime karie ka oghara ichi ngwa ngwa.
Nke a bụ ihe ị na-enweghị ike iji ozugbo. Dị ka ọ pụtara ozugbo, ịnwere ike iji nke a dịka usoro nke na-elekwasị anya na mmetụta ọzọ ma ọ bụ na-elekwasị anya na iku ume gị. Kegels bụ ihe ị na - arụ ọrụ karịa oge m kwenyere na ọ na - enyere aka.
Harley davidson igwe kwụ otu ebe
Will ga-eme mmega ahụ. Were ya na ị na-aga mgbatị ahụ ma na-ejide ụfọdụ dumbbells ma na-eme 3 set nke 10 reps. Ga-eme ihe ahụ na skittles, belụsọ ọ nwere ike ịbụ usoro ugboro atọ nke ugboro ugboro yana oge.
Ekwesighi m ikowa nke a ma oburu na ichoro. Nwere ike ịga wee họrọ ihe dịịrị gị mma maka ogologo oge ịchọrọ ịme. Can nwere ike ịga na ịntanetị naanị chọọ mmegharị kegel ma mee ya.
Ma ọ bụghị ya, ịnweghị ọbụna ime nke ahụ. Nwere ike ịme 3 usoro 10 taa ma jigide 5 sekọnd ma ị ga-ahụ na ọ siri ike. Nwere ike ime ya ugbu a ma ọ bụrụ na ịchọrọ otu ahụ ahụ.
Ọ na - ewusi ya ike na nke ahụ ga - enyere gị aka na ejaculation. Gịnị ugbu a? Kedu ihe ị ga - achọ ime ugbu a? Bido na omume kegel taa. Nke ahụ bụ ihe ị ga - eme ugbu a.
I nwere ike ime ya mgbe ọ bụla ị chọrọ. 3 set nke 10 na-eme ya na 5 ruo 10 sekọnd. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ, lelee ịntanetị ma hụ ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla a kapịrị ọnụ site n'aka ndị ọkachamara na mpaghara egwuregwu a na-enye gị ọzụzụ iji wusi ahụ ike pc gị ike ka ị nwee ike ịlele ya.
Na oge ọzọ ị na nwa agbọghọ na ị dị njikere ịga, Achọrọ m gị ka ị nwere ike ka ị nọrọ na oge kwesịrị ekwesị ebe a. Mee ka ahụ gị zuru ike ma zuru ike. Esemokwu na-eme n’ahụ́ gị.
Mkpụrụ ahụ gị niile siri ike. Ozugbo ị na-achọ ịchụ ọbara - esemokwu ma lekwasị anya na iku ume gị ma ọ bụ mmetụta dị n'ụkwụ gị. Họrọ otu n'ime ndị a ma nye ha oge ọzọ gị na nwa agbọghọ ga-anọ.
M bet dịkarịa ala otu n'ime ndị a ga-enyere gị aka. E gosiputala ya site na ụmụ nwoke ndị na-apụ apụ ma nwee mmekọahụ, otu n'ime ha ga-arụ ọrụ maka gị. Ekwesịrị m ịkọwa usoro mmemme m nke ị nwere ike ịlele na www.getherhooked.com.
Nke a bụ mmemme nke agaghị akụziri gị etu esi adị mma na ime ụlọ. Ma, ọ ga-akụziri gị otu ị ga - esi ruo ebe ị nwere ọtụtụ ụmụnwaanyị ị ga-ehi ụra ma nwee ọtụtụ ụmụnwaanyị ka gị na ha nọrọ. Ihe mere i ji chọọ inweta mmemme a bụ maka na ọ ga-akuziri gị ụzọ ziri ezi ka i wee chekwaa oge ma nwee olile anya na ị ga-enwe ike iji usoro niile m gosiri gị taa.
Ọ bụrụ na ị bụ ụdị nwa okorobịa chọrọ ịmụ nke a mana enweghị mmekọahụ ma chọọ ịmụ etu esi anọnyere ọtụtụ ụmụ nwanyị wee gaa www.getherhooked.com maka usoro ịntanetị m iji nye gị usoro A na Z na-akụzi otu esi ezute ụmụ nwanyị na ntanetị ma ọ bụ na ihu na ihe ị ga-ekwu na otu esi ejigide ha.
Amaara m na ọ dị oke mma ịbụ eziokwu. Ma ị ga-ahụ na peeji nke iwu na enwere ihe dị ka mmadụ 20 bụ ndị dere ederede akaebe, ndị a bụ naanị ndị m gosipụtara, enwere ọtụtụ karịa n'ihi na narị otu narị na narị otu narị mmadụ nwetara mmemme ahụ mana ị ga-ahụ ọtụtụ nke ndị mmadụ nwetara nsonaazụ site na ya ma ị nwere ike ịhụ ihe nsonaazụ ga-ekwe omume maka gị. Lelee ya.
Nweta ya nkowa ntụpọ com. Olileanya na a na-enyere. Lee gị n'isiokwu na-esonụ.
Gini mere bodybuilders ji ewere Viagra?
Mana ihe homonụ sịntetik a kacha mara amara dị ka mgbakwunye ndị werebodybuildersna ndị na-eme egwuregwu iji wulite akwara ma melite arụmọrụ egwuregwu.Viagrabụ ọgwụ a na-enyekarị maka ịgwọ ọrịa na-erectile (ED). Ọ na-arụ ọrụ site na ịmepe akwara akwara maka mmụba ọbara ka ukwuu.Ọkt 24 2018
Nwere ike ịmega ahụ tupu ị na-ewere Viagra?
Ndị na-agba ọsọ achọtala ọtụtụ ihe ndị ọzọ ịnabata Vitamin V, agbanyeghị. Romano kwuru na ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-ewereViagraya na steroid nke anabolictupukarụpụta, na-enwe olileanyaViagra siikike ịbawanye arịa ọbara ga-enyere aka ịnye anabolics na akwara dị iche iche ha.June 10. 2008 r.
Ndi viagra n’enye gi nsogbu ma abia?
Viagraanaghị akwụsịnke gierection na-agbadamgbe ị gbachara ọbara, ya meregị'O nwere ike idanke gierectionmgbe i mechara. Ọ bụrụgịna-enwe nsogbu orgasming ngwa ngwa mgbe ahụgịnwere ike ịchọ ọgwụgwọ dị iche maka ejaculation akaghi aka.Gịnwere ike nweta ihe karịrị otu erection mgbe naViagra.
Ndi Sildenafil na-eme ka ike di ike?
Adịghị ala ala ọgwụgwọ nasildenafilka mmaumenguzozi na insulin na-arụ ọrụ na oke ụmụ oke nwere oke abụba. Ọrịa shuga. 2007 Apr; 56 (4): 1025-33. ma ọ bụ: 10.2337 / db06-0883.
Kedu ihe kpatara ndị ji arị ugwu ji ewere Viagra?
Ọgwụ mgbochi ọgwụViagranwere ike ichebendi ugwusi na-emepe emepe akpa ume nsogbu mgbe ụfọdụ metụtara na elu elu, na-eme nnyocha achọpụtala. Enweghị oxygen nwere ike ịkpalite obi na akpa ume ọnọdụ ọbara mgbali akpa ume.Ọgọst 4 2004
Viagra ọ na - etozi testosterone?
Sildenafil na-abawanyeọbaratestosteroneetoju site kpọmkwem emereme na testes. Ihe omumu.Sep 18 2013
ipigide n'azụ derailleur
Nwere ike iji Viagra na testosterone ọnụ?
Ha abụọtestosteronenaViagra nwere ikewere, kamahaha na-agwọ nsogbu dị iche iche. Ma obuonye nwere ike'A ga-eji ya na-emeso ma enweghị agụụ mmekọahụ na nrụrụ erectile.Ọ bụrụa mmadụ naanị erectile adịghị arụ ọrụ na nkịtị agụụ mmekọahụ, na ijikọtaViagra na testosteronenwere kwukwara uru, dị nnọọViagra ga-ezuo.Ọkt 9 2020
Kedu ihe Viagra na-eme n’ahụ gị mgbe ị na-emega ahụ?
Viagra: Nchoputa ohuru banyere oru mmega. Viagra na - eme ka ọbara na - achịkwa. Mkpụrụ ahụ chọrọ ọtụtụ ọbara iji wepụ ihe mkpofu ma nyefee ike, oxygen, na homonụ. Bawanye ọbara nwere ike ime ka nnyefe nke amino acid dị mkpa na akwara, nke ga-akwalite njikọ protein na uto.
Enwere njikọ n'etiti sildenafil na Viagra?
Viagra bụ aha aha sildenafil. E webatara ya dị ka ọgwụ na-agwọ ọrịa akwara ma ọ ghọrọ ọgwụgwọ maka nrụrụ erectile. Dịka ọgwụ ọgwụ, Sidenafil nwere ike inye aka mee ka ọrụ ike na njikọ protein pụta - mana ọ bụ naanị na ụmụ nwoke na-azụghị ọzụzụ. Viagra na-amụba testosterone ntakịrị, ma ọ bụghị ọtụtụ.
Kedu ka Viagra si emetụta mmega ahụ dị elu?
Gba ọsọ igwe na elu dị elu site na 15 percent. Ọgwụ ahụ mụbara ikike mmega ahụ site na mbenata ọbara mgbali na ngụgụ, nke na-abawanye na elu elu. Ọ bụghị isiokwu niile ritere uru na ọgwụ a - enwere ndị na-aza ajụjụ na ndị anaghị anabata ya.